Booliiska Maraykanka oo ku guulaystey inay gacan ku dhiigle Somali ah qabtaan - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Booliiska Maraykanka oo ku guulaystey inay gacan ku dhiigle Somali ah qabtaan
Booliiska Maraykanka ayaa ku guulaystey inay gacanta ku soo dhigaan gacan ku dhiigle xaaskiisa dilay kadibna cagta wax ka dayay. Xaaskiisa oo lagu magacaabo Muna Kuri ayaa ahayd gabadh shaqaysata oo bulshada dhexdeeda aad looga yaqaanay. Waxay lahayd xarun lagu xanaaneeyo caruurta waalidiintoodu shaqeeyaan.
Ninkan baxsaday oo lagu magacaabo Cabdicasiis Keerow ayaa laga soo qabtey dalkaasi yar ee Baanama bishan 20-keedii isla markaana dib loogu soo celiyay magaaladii uu dilka foosha xun ee doqoniimo ugu gaystey xaaskiisa.
“Waxa isla markiiba loo dhaadhiciyay jeel ku yaala magaalada Sandiyeego oo ku taal xadka Megsiko. ” Muna walaasheed oo raadisay markey ka waydey xaruntii caruurta ay ku xanaaneyn jirtey, ayaa dalbatey in guriga loo jabiyo halkaas oo ay ku aragtey walaasheed oo korka sare ka dilan. Booliiska ayaa qaba xilligaas in dilku dhacay ugu yaraan maalin iyo bar kahor.
Booliiska ayaa iyagu sheegin meelaha ay nabaradu kaga yaaleen. Rafcaanka gacan ku dhiiglahan ayaa la sheegayaa inuu yahay 5 milyan oo doolar.
Qareenka loo qabtey gacan ku dhiiglahan ayaa diyaarinaya inuu gudbiyo dacwad ah in ninkaani waalnaa, waxayna ka mid tahay siyaabaha wadamada gaalada looga baxsado jeel mudadiisu dheertahay.
Si kastaba ha ahaa Muna ma helayso cadaalada ay u baahan tahay oo ah in gacan ku dhiiglahan la marsiiyo. Ehelada ay ka baxdey ayas ugu yaraan ku faraxsan in gacan ku dhiiglahan la soo qabtey. Inkastoo kiiskani cad yahay ayaa haddana la marin doonaa dacwad dheer.